Lacagtooda qayb u celi. !!!
Monday February 25, 2019 - 11:07:01 in Wararka by Mogadishu Times
A) Dakhliga ugu badan Dalku waxa uu Ka Soo xaroodaa Xoolaha aan dhoofino ama aan gudaha Dalka ku dhaqano, Dadka ugu badan Bulshada ayaana Ku tiirsan Xoolaha. B ) Walaalaheen Cali iyo Axmed waa xoola dhaqato, Xoolahooda looma daaweeyo, Daaqsin iyo wa
A) Dakhliga ugu badan Dalku waxa uu Ka Soo xaroodaa Xoolaha aan dhoofino ama aan gudaha Dalka ku dhaqano, Dadka ugu badan Bulshada ayaana Ku tiirsan Xoolaha. B ) Walaalaheen Cali iyo Axmed waa xoola dhaqato, Xoolahooda looma daaweeyo, Daaqsin iyo waraabkooda lagama fekero, Naftooda iyo qooysaskooda looma Daaweeyo, Nabadgalyadooda wax lagama qabto, Lacagta Ka Soo xarooto Xoolahooda qeyb Ka mid ah dib looguma celiyo.(F.S:1aad)
Haddaan dib loogu celin ee Xooluhu Ka dhamaadaan, Magaalooyinka ayey Soo galayaan, qorsho Nololeed looma hayo, Dakhligii laga heli jirayna waa la weeynayaa.
C) Siyaasiyiinta Muxaafidka ah iyo kuwa Mucaaradka ah badankooda, weligeey ma arag iyaga oo isku heeysto sidee dadkaa Reer miyiga ah loo Horuumariyaa, inta Badan labadoodu waxa ey isku heeysataan, Habkeen u qaadanaa Lacagtii Ka Soo xarootay Tacabkii Cali & Axmed oo kaliya, Annaguna intaa ayaan Ku Kala taageernaa Labadaa Danleeyda ah.(F.S: 2aad).
D) Laxdeeyda iyo Ceesaanteeyda ayaa hadda khatar ku jira sidee loo badbaadiyaa ? Sidee Loogu sheegaa Mucaarad & Muxaafad in Dooda ey Ku daraan Bulshada qeybta ugu badan in wax loogu qabto, qeyb Ka mid ah Tacabkoodii? Sidee looga Celiyaa Siyaasiyiinta Khasnada qeybta Xoola dhaqatada?
Sidee Laxdeeyda iyo Ceesaanteeyda Ka dhuumayo Siyaasiyiinta loo badbaadiyaa? ( F.S: 3 & 4aad).
Talo: Wasaaradda X.Xooluhu hala timaado, qorshe wax loogu qabto Xoola dhaqatada. Khasnadda Furaheeda yaan loo dhiibin, Siyaasiyiinta Mucaarad iyo Muxaafidka ah ee lagu yaqaan Khasnadda jabiska iyo Jeeb buuxsiga, Reer miyiga ha lagala tashado qorshaha baahidooda.
Laxdeeyda & Ceesaanteeyda Cabsida Ka muuqato, Adigu xal u keen.